Madaxwaynaha Jubaland oo ka hadlay dhismaha goleyaasha deegaanka – Radio Daljir
Madaxwaynaha Jubaland oo ka hadlay dhismaha goleyaasha deegaanka
Janaayo 24, 2018 7:15 b 0
Madaxwaynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) oo kulan la qaatay guddoomiyeyaasha degmooyinka Jubaland iyo masuuliyiin katirsan wasaaradda arimaha gudaha ee maamulkaasi ayaa waxaa uu sheegay inuu meel wanaagsan marayo qorshaha horumarinta degmooyinka Jubaland.
Madaxwaynaha ayaa sheegay inay midaynayaan mashaariicda horumarineed ee ka socda deegaamada Jubaland, isagoona xusay in marka hore la dhmaystirayo goleyaasha deegaanka oo loo dhisayo deegaanada ay gacanta ku hayaan Jubaland.
Waxaa uu sheegay degmooyinka Buur Dhuubo iyo Dhoobley ay ka mid yihiin deegaamada mashaariicda laga fulinayo, marka horena loo dhisayo goleyaasha deegaanka.
Waxaa uu balanqaaday maamulka Jubaland inuu baahin doono mashaariicda kale duwan ee uu fulinayo iyadoo uu kaashanayo deeq bixiyeyaasha caalamiga ah.
Waxgaradka degmada Cadaado oo bogaadiyay xalinta madaxwaynaha ee tabashada deegaanka (dhegayso)